Machadka Cilmi -baarista Algae ee Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2011, iyada oo ah waax cilmi -baaris iyo horumarin algae xirfad leh oo hoos timaada King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd., Waa mid ka mid ah dhowr machadyada cilmi -baarista algae ee dalka oo dhan hadda. Machadkani wuxuu si firfircoon u sameeyaa iskaashi farsamo iyo is -weydaarsi, si isdaba joog ah u fuliya iskaashi farsamo kulliyadaha gudaha iyo jaamacadaha (sida Jaamacadda Qinghua, Akademiyada Sayniska Shiinaha, Jaamacadda Fuzhou, Jaamacadda caadiga ah ee Fujian, Jaamacadda Huadong ee Sayniska iyo Teknolojiyadda, iwm) iyo cilmi machadyada, helay Phycocyanin, Polysaccharide iwm guulo badan oo ka mid ah alaabta cusub iyo shatiyada iyo xuquuqda kale ee hantida aqooneed.
Machadka cilmi -baarista Algae ma aha oo kaliya wakiilka shirkadda si uu u fuliyo is -weydaarsi iyo iskaashi, wuxuu kaloo leeyahay koox tijaabo iyo kormeer oo tayo leh, si loo dammaanad qaado xasilloonida tayada badeecadaha iyo casriyeynta teknolojiyadda alaabta.
Machadka cilmi baarista algae King Dnarmsa, oo ah mid ka mid ah hay'adaha cilmi -baarista algae ee dalka, kaliya ma xallin dhibaatooyin farsamo oo badan xagga taranka, badeecadaha cusub iyo horumarinta geeddi -socodka, laakiin sidoo kale waxay si firfircoon u fuliyeen iskaashi farsamo iyo is -weydaarsi shisheeye. Waxay wadashaqeyn la yeelatay jaamacadaha gudaha iyo machadyada cilmi-baarista ee caanka ah waxayna heshaa tiro ka mid ah badeecadaha cusub iyo shatiyada iyo natiijooyinka kale ee hantida aqooneed.